Ny zavatra manan-danja indrindra ho an'ny tranonkala SEO amin'ny aterineto?
Amin'izao fotoana izao, ny fifaninanana dia henjana ao anatin'ireo indostria rehetra izay manatrika eo amin'ny tsena nomerika. Ireo mpivarotra an-tserasera dia miady ho an'ny mpanjifa mety ary manao izay rehetra azo atao mba hahatonga ny landy mpanjifa amin'ny sehatra ao amin'ny tranonkalany rehefa mitady ny vokatra azonao. Io no iray amin'ireo tanjona ara-barotra manan-danja indrindra hahatonga ny fifamoivoizana mitodika any amin'ny tranonkala iray - on-demand workforce decision support solutions. Ny fanatsarana ny fikarohana dia ny safidy tsara indrindra ahafahana manatsara ny fifamoivoizana amin'ny tranokala amin'ny fomba organika. Na dia izany aza, maro ireo mpivarotra an-tserasera no mbola tsy mazava tsara ny tena marina sy ny fomba fampiharana izany amin'ny tranonkala iray.
Online tranonkala SEO
SEO na fanatsarana ny fikarohana dia mifototra amin'ny karazana teknika fanatsarana izay natao hanampiana ny loharanon'ny Internet hahazoana toerana ambony valin'ny fikarohana. Tsara ny manamarika fa ny SEO dia manondro fotsiny ny valin'ny fikarohana organika ary tsy misy ifandraisany amin'ny fikarohana karama izay tarihin'ny Google Adwords.
Ny tanjona voalohany amin'ny fanatsarana ny môtô dia ny hahatonga ny tranonkala ho hita kokoa amin'ny mpikaroka ary hampiova fo ireo mpikaroka ireo amin'ny fandoavana lamandy. Raha ny tranokala noforonina araka ny fitsipiky ny fikarohana rehetra, dia azo heverina ho tsara kokoa. Misy karazana SEO - eo amin'ny pejy fanatsarana sy fanatsarana ny pejy. Ny lafiny voalohany dia manatsara ny fanandraman'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao. Ny faharoa dia manampy amin'ny fampitomboana ny fanentanana sy ny mombamomba ny marika eo imason'ny mpanjifa anao ary ny fikarohana bots. Ny fitaovana fikarohana kokoa kokoa mihevitra fa ny tranonkalanao dia amin'ny teny fikarohana voafaritra, ny avo kokoa ny tranonkala dia mamaritra ny valin'ny fikarohana. Ny fehezan-teny mifototra amin'ny volavolan-dalàna dia lohahevitra manan-danja hampiasaina amin'ny fanentanana fanentanana.
Fitsipika fototra ao amin'ny tranonkala SEO
Rehefa ampidirinao ao anaty boaty fikarohana iray ny "toro-làlana fanatsarana ny fikarohana" dia misy lahatsoratra an'arivony miseho eo anoloanao. Tsy ny rehetra no atao tetik'asa. Na izany aza dia mety hahazo fampahalalana mahasoa ho an'ny orinasanao an-tserasera ianao avy amin'ireo loharanom-baovao rehetra ireo.
Ny dingana voalohany sy ny dingana manan-danja indrindra amin'ny tranonkala fanatsarana dia ny fikarohana teny fototra. Izy io dia mametraka eo amin'ny andalana farany amin'ny fanentanana fanentanana handresena. Tokony hifanaraka amin'ny fikarohana ara-tsiantifika sy ny fanadinana fifaninanana izany dingana izany.
Amin'ny dingana faharoa, rehefa manana lisitry ny fikarohana momba ny sehatra manan-danja sy avo lenta ianao, fotoana izao hamoronana votoaty manan-danja sy avo lenta. Ankoatra ny fananana tsara kokoa izay mifandray amin'ny vokatrao ary manolotra ny marikao amin'ny lafiny tsara indrindra, ny fitaovam-pitadiavana dia mankasitraka ny toetr'andro, ny kalitao sy ny votoatiny tsy manam-paharoa.Mila manavao tsy tapaka ny votoatinao ianao ary mahazatra azy ireo amin'ny teny fiteninao avo be. Fotoana tsara ho an'ny tompon'ny tranokala e-commerce izay te-hanatsara ny fanatrehany amin'ny aterineto dia ny famoahana bilaogy. Afaka manomboka blôgy ao amin'ny tranokalanao ianao mba hamoahana votoaty vaovao izay manohana ny SEO anao.
Avy eo dia ilainao ny manondro ny lafiny ara-teknika amin'ny tranonkalanao, manatsara ny tranonao anatiny, ny fifandraisana, ny design ary ny HTML. Ireo lafiny ara-teknika ao amin'ny tranonkalanao ho toy ny famakivaky ny finday sy ny tranonkala entana haingana dia misy fiantraikany mivantana amin'ny toerana misy anao, indrindra ao amin'ny Google. Izany no antony ilainao hamoronana fomba fanehoana an-tsary sy mora ampiasaina mba hanatsarana ny traikefa azon'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao. Raha te hanamarina ny halavan'ny fotoana hakana ny tranokalanao dia azonao atao ny mampiasa ny Google PageSpeed ​​Tool.